မိတ်ဆက်လာမယ့်ရက် အတိအကျသိလာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Subaru Forester Wilderness! – MyMedia Myanmar
မိတ်ဆက်လာမယ့်ရက် အတိအကျသိလာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Subaru Forester Wilderness!
အခု ဩဂုတ်လ အစပိုင်းတုန်းကပဲ Subaru အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကြမ်းစား Wilderness Trim အသစ် ကိုအနည်းငယ် စတင်ချပြလာခဲ့ပါ တယ်။ EPA Fuel Economy Filings အချက်အလက်တွေ အရတော့ 2022 Subaru Forester အပေါ်မှာ အခြေခံထုတ်လုပ်လာမှာ ဖြစ် ကာ အရွယ်အစားနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ အရတော့ Outback Wilderness ရဲ့ အောက်မှာ ရပ်တည်လာနိုင်ပါတယ်။ မူလကတော့ အဆိုပါ ကား အသစ်ကို အခုတစ်ပတ်မှာ ကျင်းပဖို့လျာထားခဲ့တဲ့ 2021 နယူးယောက် ကားပြပွဲကြီးမှာ ချပြဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် ကားပြပွဲကလည်း ကပ် ရောဂါကြောင့် နောက်ဆုတ် သွားခဲ့ပြန်တာကြောင့် 2022 WRX နဲ့ အတူတူ ချပြလာဖို့အတွက် နောက်ကျခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က တော့ ထင်ထားတာထက် နောက်ကျမယ်လို့ တွက်ဆထားခဲ့ ကြပေမယ့် အခုတော့ အဆိုပါကားသစ်ကို စတင် ပွဲဦးထွက် မိတ်ဆက်မယ့် ရက်အတိအကျ ကိုပါ သိရှိလာရပါပြီ။ Subaru ကတော့ Video တစ်ခု တင်ပေးခဲ့ပြီး ယခင် Teaser တွေမှာ မြင်ခဲ့ရတာတွေထက် အတော် လေးကို အသေးစိတ်ချပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ Forester ကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရပြီး ရွှံ့နွံထဲ ၊ ကျောက်ဆောင်တွေကြားထဲနဲ့ နှင်းတော ထဲမှာ မောင်းနှင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အသွင်နဲ့ ချပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The Wild Is Calling ဆိုတဲ့ အကြမ်းစား စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မယ့် သဘောကိုဆောင်တဲ့ စာသားနဲ့အတူ ချပြထားခဲ့ပြီး Video ရဲ့ Caption မှာ ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတော့ ‌ထူးခြားလေးနက်တဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ အတွက်ကို အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ ကား တစ်စီးလို့လည်း ရည်ညွှန်းပြထား ပါ တယ်။ Subaru ရဲ့ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကနေ အခုလို နောက်ထပ်တစ်ဆင့် ‌ထူးခြားတဲ့ Wilderness Family ပါ ရောက်ရှိ လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခုကားအသစ်မှာတော့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေလည်း အများကြီးပါဝင်လာမှာဖြစ်သလို အတွင်းခန်းနဲ့ အပြင်ပိုင်းမှာပါ အတော်အသုံးဝင်မယ့် ဖန်တီးမှုနည်းပညာသစ် တွေလည်းထည့်သွင်း ပေးလာမှာပါ။ Subaru ကတော့ အခု ကားကို ထုတ်ပြဖို့ အတွက် ရက်အတိအကျ ချပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂ ရက် နေ့မှာတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် မြင်တွေ့ နိုင်တော့မှာပါ။ EPA Filing အပေါ် မှာ အခြေခံ ပြီး ကြည့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ Wilderness Model အသစ်မှာ 2.5 Liter Boxer Four-Cylinder အင်ဂျင်ကို အခြားသော Forester Trim တွေ မှာလိုပဲ တပ်ဆင်ပေးလာမယ်လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ အင်ဂျင် အနေနဲ့ 182 hp နဲ့ 176 lb-ft Torque အထိ စွမ်းဆောင်လာနိုင်ပြီး Four-Wheel Drive စနစ်နဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်မယ့် Transmission စနစ်လည်း တပ်ဆင် ပေးထားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတာ တစ်ချက်ကတော့ အခု Forester အသစ်မှာ Turbocharged Engine ရွေးချယ်စရာ ပါမလာ‌တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော Outback Wilderness Model ‌လိုပဲ အခု Forester Version မှာလည်း ကားရဲ့ အမြင့် ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးလာကာ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ တာယာတွေကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ အပြင်ဘက် အမြင်တွေဆန်းသစ်လာ အောင် အများကြီး ဖန်တီး ပေးထားပြီး အပြာရောင် ဆေးသားအသစ် နဲ့ Geyser Blue ဆိုတဲ့ အရောင်ကိုလည်း ရရှိအောင် စီစဉ် ပေးထားပါ သေးတယ်။ အခု Wilderness အသစ် ကို Forester Range ထဲမှာ ထားမလားဆိုတာ မသေချာပေမယ့် $ 34,895 ကျသင့်တဲ့ Loaded Touring Model ရဲ့ အောက်မှာရပ်တည် လာနိုင်မယ့် ကားတစ်စီးဆိုတာတော့ သေချာနေပါတယ်။
The post မိတ်ဆက်လာမယ့်ရက် အတိအကျသိလာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Subaru Forester Wilderness! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-22T19:03:01+06:30August 22nd, 2021|MYCARS MYANMAR|